Nahoana no zava-dehibe ny fiarovana ny posidonia Oceanica? | Fanavaozana maintso
Nahoana no zava-dehibe ny miaro ny posidonia Oceanica?
Portillo Alemanina | | tontolo iainana, Tontolo_iainana
Posidonia oseana Fantatra amin'ny andraikiny eo amin'ny morontsiraka sy ny toe-bolany. Betsaka ny olona mahalala na efa naheno ny posidonia Oceanica, saingy tsy mahalala ny antony maha-zava-dehibe izany sy ny fiasan'izy ireo.
Ny iray amin'ireo zavatra voalohany tokony ho fantatra momba ny posidonia Oceanica dia ny manavaka azy amin'ny ahidrano. Posidonia dia tsy algôma, zavamaniry anaty rano izy io. Izy io dia misy voankazo, voninkazo, ravina, fotony sy fakany toy ny zavamaniry mahazatra. Te hahafantatra ve ianao avy eo hoe maninona no tena ilaina ny mitahiry azy?
1 Posidonia oseana
2 Ny maha-zava-dehibe ny posidonia ranomasimbe
3 Inona no misy fiatraikany amin'ny posidonia Oceanica?
Ny posidonia Oceanica dia zavamaniry anaty rano izay mamony amin'ny fararano ary mamokatra voankazo fantatra amin'ny hoe "oliva an-dranomasina". Zavamaniry photophilic izy io, izany hoe mila tara-masoandro na dia eo ambanin'ny rano aza izy hanatanterahana photosynthesis. Ankoatr'izay, ny posidonia dia zaraina any amin'ny ranomasina mandrafitra ahidrano.
Ny iray amin'ireo fiasa izay ananan'ny posidonia dia ny ho famantarana tsara ny rano madio, satria ao anaty rano madio ihany no ipetrahany. Tsy mahazaka toerana maloto tsara izy ireo, tsy misy oxygen, miaraka amin'ny turbidity be na amin'ny zavatra organika be loatra. Izy io dia zavamaniry tsy manam-paharoa amin'ny Ranomasina Mediterane, nambaran'ny UNESCO ho vakoka manerantany ho fankasitrahana ireo tombontsoa marobe ao aminy.
Ny maha-zava-dehibe ny posidonia ranomasimbe
Iray amin'ireo lahasa lehibe omen'ny ahidrano ahidrano Izy ireo dia manome biomassa sy ôksizenina hamorona toeram-ponenana mety amin'ny fiveloman'ny karazana maro. Noho izany, raha manampy amin'ny fahaveloman'ny karazana maro ny posidonia, dia mampitombo ny fahasamihafan'izy ireo ny morontsiraka misy ireo phanerogams ireo. Ny tontolo iainana manana karazan-karazany maro karazana dia tsy mora tohina amin'ny fiantraikany azo vokarina eo aminy.
Ny iray amin'ireo asa lehibe indrindra amin'ny posidonia dia ny fampihenana ny fikaohon-tany iharan'ny morontsiraka. Izy ireo dia manao izany amin'ny alàlan'ny fampihenana ny habetsaky ny antsanga izay miaraka amin'ny onja mitazona azy eny amoron'ny kijana. Ankoatr'izay dia mamorona sakana manohitra ny onja izy ireo. Ny ala dia mamokatra oksizenina eo anelanelan'ny 4 sy 20 litatra isan'andro isaky ny metatra toradroa, izay iray amin'ireo loharanom-pahalalana lehibe indrindra amin'ny oxygenation ao amin'ny Mediterane. Ny ampahany amin'ity oxygen ity dia miparitaka amin'ny atmosfera eto an-tany mandritra ny fotoana famokarana betsaka indrindra.
Raha manomboka manisa ny isan'ireo karazana velona velona isika noho ny ahitra posidonia, manana karazana zavamaniry 400 eo ho eo izahay ary karazana biby 1.000 eo ho eo. Ireo zava-manan'aina rehetra ireo dia samy manana ny toerany ao amin'ny ala maitso posidonia. Noho izany, ny fitehirizana ireo ala ireo dia manan-danja tokoa raha te hitahiry ireo ambin'ireo karazam-biby ampiana isika. Ny ahitra koa dia toerana fambolena tsara toy ny spaonjy, trondro kintana, molotra, trondro an-jatony, ranomasina, sns.
Betsaka ny karazan-java-maniry miteraka ao amin'ny kijana posidonia no liana ara-barotra, ka ny fanimbana azy ireo dia hiteraka olana lehibe eo amin'ny toekarena eo an-toerana izay miaina amin'ny jono. Ny fizahan-tany fitsangatsanganana dia hahafoana ny lanjany lehibe koa amin'ny fanapotehana ny ala maitso posidonia. Tombanana ho tombony ara-toekarena vokarin'ny tanety eo amin'ny 14.000 Euros isaky ny hektara isan-taona izy ireo.
Inona no misy fiatraikany amin'ny posidonia Oceanica?
Ny fahasimban'ny ala dia haingana dia haingana noho ny fiantraikan'ny olombelona aminy. Ny fiatraikany toy ny fandotoana ny ambany, ny fihoaram-be amin'ny zavamaniry (izay misy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny zavamaniry) ary ny fiakaran'ny hafanan'ny rano ao amin'ny Mediteraneana vokatry ny fiovan'ny toetr'andro dia ny sasany amin'ireo vokatra manimba ny ahitra posidonia. Aorian'ny fahavaratra mafana, ny taham-pahafatesana dia lehibe tokoa ka ny fahavoazana dia tsy afaka ampidirina amin'ny fitomboana, izay miadana be.
Iray amin'ireo hetsika ataon'ny olombelona izay manimba ny vala posidonia indrindra dia ny fanaratoana tsy ara-dalàna. Ny ala dia potika koa amin'ny fitrandrahana, fanariana, fako vokarin'ny fiompiana anaty rano, fananganana amoron-tsiraka, ahidrano manafika sns.
Araka ny hitanao, ity zavamaniry ity dia ilaina loatra tsy hiarovana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Nahoana no zava-dehibe ny miaro ny posidonia Oceanica?
Trano hazo, fomba hisafidianana azy ireo, tombony sy fatiantoka